Isikhokelo sokuthenga esigqibeleleyo se-SARM SR9009 sokwakha umzimba
/Blog/Ithala/Isikhokelo sokuthenga esigqibeleleyo se-SARM SR9009 sokwakha umzimba
ezaposwa ngomhla 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
SR9009 okanye i-stenabolic sisongezelelo se-CAS 1379686-29-9 esilingisa iziphumo zokuzilolonga kwe-cardio. Ayisiyi kukunceda kuphela ekunciphiseni amanye amafutha omzimba wakho, kodwa iya kukonyusa amandla akho ngelixa ukonyusa unyamezelo.
I-SR9009 SARM idlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni iRev-Erb. Le proteni ichaphazela ukubanakho komzimba ukutshisa amanqatha amaninzi, iswekile, kunye ne-cholesterol embi. Ke ngoko, inyusa inkqubo yokunciphisa umzimba ngelixa iphucula unyamezelo. Nokuba ubuzilolonga, uya kuziva unamandla kwaye awudinwanga kangako ukuze ukwazi ukwenza uqeqesho ngakumbi lomzimba.
I-Stenabolic yenza amanqatha, ii-lipids kunye neeswekile. Xa umbane usetyenziswa ngokugqibeleleyo, ngokuqinisekileyo uya kufumana ukusebenza okuphezulu. Kwisifundo saphambi kokusebenzisa iimodeli zemigca, iimpuku ezaziphantsi kwe- I-SR9009 powder (I-1379686-30-2) umthamo wawunakho ukuqhuba kabini ngokukhawuleza kunangaphambili. Esi siqwenga sobungqina sinokuba sisizathu sokuba i-stenabolic idweliswe phakathi kweziyobisi ezingavumelekanga kwimidlalo.
Ukuba awuyiyo i-maniac yokuzivocavoca, ezi ndaba zezi iindlebe zakho zifuna ukuva. I-Stenabolic iphinda iphindwe kabini inqanaba lokunciphisa umzimba xa uphumla. Emva kokutya, umzimba wakho uguqula ukutya kube ngamanqatha. Nangona kunjalo, i-SR9009 yokuncipha kokunciphisa umzimba kuya kuyomeleza kwangoko imetabolism yokuba uza kuqala ukutshisa la mafutha kwangoko.
I-SR9009 SARM iphucula iinkqubo ze-metabolic. Nje ukuba ukungenisa kwenzeke, i-stenabolic iya kuthi icwangcise umzimba ukuba utshise ii-calories ezingaphezulu kokuziguqula zibe ngamafutha. Isongezelelo asipheleli nje ekulinganiseni ugcino lwamafutha, kodwa sinciphisa ukuveliswa kweeseli ezitsha zesibindi esibindini.
Esi songezelelo asonyusi kuphela ubunzima bemisipha kodwa siphucula amandla kunye nokusebenza. Imvakalelo oyifumana emva kokuhambisa idosi ye-SR9009 ilingana naleyo yokuphakamisa ubunzima.
Ngokwonyango, i-SR9009 izisa uncedo kubantu abadala abanengxaki yokuhla kwemisipha okanye i-sarcopenia.
Uninzi lwabantu abenza umthambo abayi kuphoswa kukubandakanya izihlunu ze-SR9009 ezifumana iziyobisi kwirejimeni yazo yokwakha umzimba. Uya kuphakamisa iintsimbi, usebenze umatshini wokunyathela, okanye wenze nawuphi na umthambo ngaphandle kokuziva udiniwe okanye unentloko elula.
Isongezelelo ngokungathandabuzekiyo siyakuthatha intsebenzo yakho njengenotshi ephezulu kunangaphambili. Ukuba ucinga ukuba ezi zibonelelo ze-SR9009 bubuqhetseba, kuya kufuneka ubuze ukuba kutheni i-arhente echasene nokusetyenziswa kweziyobisi inokukuthintela ngokuqinileyo ukusetyenziswa kwayo kwimidlalo yokhuphiswano.
Njengoko uThomas Burris, umsunguli we-Stenabolic, etshilo, ichiza liyakuguqula ube yimbaleki enamava ngexesha elithile. Awuyi kuphelelwa ngamandla okanye amandla nokuba wenza imithambo enzima.
Enkosi kwi-SR9009 emfutshane yobomi obunesiqingatha, isiphumo sokuvuka sinokuhlala ixesha elifutshane. Ke ngoko, awuyi kulala imini yonke.
Ubomi besiqingatha se-SR9009 bufutshane njengeeyure ezine. Ngesi sizathu, kuya kufuneka uhlule idosi yakho kumanqanaba eeyure ezine ukuzinzisa ukungafumaneki kweziyobisi egazini.
I-SR9009 idosi yeehenjisi kwizinto ezimbalwa. Oko kukuthi, unqwenela ukufezekisa nokuba ubandakanya ezinye izongezo kumjikelo wakho. Ngaphandle koko, isixa sobugqirha sikwaxhomekeke kwindlela umzimba wakho osabela ngayo.
I-Stenabolic ayisiyo Isidakamizwa. Ke ngoko, ukuyithatha akuyi kuphazamisa inkqubo yehomoni. Amanqanaba akho e testosterone awayi kulahla, kwaye ichiza alomatize liza kwi-estrogen. Kubafazi, isongezelelo asizukukhokelela kumjikelo wokuya esikhathini ngokungaqhelekanga.
Njengoko sele uyazi, i-stenabolic ine-half-life ekhawulezayo, engayi kukuhlala usuku lonke. Ngokuchaseneyo, ukubakho kokufumaneka kwekhadiarine kufikelela kwiiyure ezingama-24. Ukudityaniswa kwezi zimbini kuya kukhokelela kwisiphumo se-24/7.
Xa kwisitaki se-SR9009, idosi yi-10mg kuphela, ekufuneka uyithathe kungekudala ngaphambi kokuba usebenze. Kwi-GW501516, iyeza elifanelekileyo ngu-20mg / ngosuku, oya kuthi ulilawule ngesidlo sakusasa.
Kubekho uqikelelo lokuba i-SR9009 ine-zero bioavailability, ngakumbi kulawulo lomlomo. Nangona kunjalo, ndingayiphika ngokuzithemba le nto kuba ukuba isongezelelo besingafumaneki, ngekhe kubekho ziphumo zilungileyo ze-SR9009 emzimbeni womntu.
Abakhi bomzimba emva kobuninzi okanye ukusika baya kuxhamla ngokupheleleyo kwi-SR9009. Kwiimeko apho kuya kufuneka uqeqeshe ngakumbi, iyeza lonyusa izinga lokubetha kwentliziyo yakho, ngaloo ndlela unciphisa ubunzima kunye nokudinwa. Ngaphezu koko, isongezelelo sokwakha umzimba se-SR9009 sinciphisa ukuvuvukala kunye nokonakala kwezicubu ukuze inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ikhawuleze.
Nangona kunjalo, ukusebenza ngokukuko kweli chiza ibilithambo lembambano phakathi kwezazinzulu kunye nabaphandi kunye nososayensi ngokubanzi. Umzekelo, bekukho ii-anecdotes zokuba i-SR9009 yomlomo yokufumaneka komzimba ayifumaneki. Ewe, andinqweneli ukwenza igqwetha longendawo, kodwa i-95% yabasebenzisi be-stenabolic bayakuqinisekisa ukusebenza kwayo. Ngaphandle koko, kuya kufuneka ubuze ukuba kutheni imibutho echasene ne-doping inokuba nesibindi sokuthintela ukusetyenziswa kwayo kwiimbaleki xa into ingasebenzi kakuhle.
Ngaba iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lwezihlunu? Uphengululo Olumnandi [ENTSHA]	Yonke into malunga ne-Oxandrolone (Anavar), kuya kufuneka uyazi